Dante Aligheri. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 sonnets | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo weDomenico Di Michelino
Dante aligheri, mudetembi ane mukurumbira wekuItaly wenguva dzose, akafa pazuva rakafanana nanhasi muna 1321 en Ravenna. Akanga achangobva kuburitsa rake risingafi basa, Iyo yeVamwari Kunyemwerera. Nhasi ndoda kurangarira nayo 7 yemamsoneti ake.
2.0.3 Tengesa zvakakwana ...
2.0.5 Zvinyoro nyoro
Akazvarwa muFlorence muna 1265, Zvaivewo muzivi kunze kwekuve mudetembi. Akarasikirwa nevabereki vake vachiri vadiki uye gare gare airwira iyo Guelph ligi kurwisa Tuscan Ghibellines. Akaroora Gemma Donati, vaaive navo nevana vatatu. Asi tese tinozviziva izvozvo rudo rwake rwechokwadi uye kurudziro aive Beatriz, mwanasikana waFolco Portinari, anga atoroorwa naSimón de 'Enjaeza.
Paakafa, Dante akazvipira pakudzidza dzidziso yebhaibheri uye zvakare vakapinda mune zvematongerwo enyika. Yatove muna 1301 yaive mumiriri muRoma uye panguva yekusavapo kwake, Florence akatorwa naCarlo di Valois. Imba yaDante yakabvutwa uye akaisirwa faindi inorema gare gare yakachinjirwa kurango rerufu muna 1302.
Akanga ari mukati Paris pakati pe1307 na1309 uye akafambawo mune yake kutapwa kuburikidza nemamwe maguta ekuchamhembe kweItaly, kusvika mu Verona akatanga kunyora basa rake repasirese, Iyo yeVamwari Kunyemwerera.
Rudo runopenya mumaziso emudiwa wangu,
uye inova nyoro kana akatarisa:
pazvinoitika, murume wese achizviona anotendeuka
uye ani naani anoona mweya murudo anodedera.
Kunosviba kana iwe ukavanza maziso ako,
uye kumuona zvakare, zvese zvinogomera:
kuzvikudza kwake kusati kwatiza nekutsamwa;
akanaka, kudza wandinonamata naye.
Anofara kane chiuru anozviona uye anozvinzwa;
apo mweya unozvarwa kusvika paunotanga
vese vanozvininipisa kufunga, kutapira kwese,
uye haazivi, akamutarisa achinyemwerera,
kana zvakasikwa zvakapfuudzwa mazviri,
kana chishamiso chakapfava zvakanyanya runako.
pamwe mune chimwe chinhu chausingaone chiripo:
Unobva kuvanhu vari kure kudaro here
kuti ndinokutarisa, nemitoro yakadzika kudaro
uye pasina misodzi mumaziso anotenderera,
pfuura nomuguta rinotambura,
kunge bofu, matsi, kusava nehanya,
kwaizove kuiona kwako kubva kune mamwe nyika?
Mwoyo wangu unondiudza pakati pekuzvidemba
-Mira kuteerera kwenguva pfupi-
kuti paunoisiya, kutyora kwacho kuchakutevera.
Nechekare BEATRIZ yake ingori mumvuri webhuruu,
uye neshoko rega rega rinoitumidza
tsime rinovava remisodzi inoyerera.
Tengesa zvakakwana ...
Anonyatsoziva kuti ndeupi waanokwazisa uye anopfugamira
chero munhu anoona wangu pakati pevakadzi;
vane ngoni dzaMwari.
Zvekunaka kwake kwakanyanya kunaka
kuti shanje harimutse kana kunyepa:
zvisati zvaitika, kushinga uye kuzvirumbidza
-zvipo zveRudo- zvinosimbisa kuvepo kwazvo.
Kubva padenderedzwa rayo kunouya unyoro
uye nekudaro vakapfeka mumoto mumwe chete,
mumwe nemumwe, achinzwa, anozvikudza.
Zvese zviri maari zvaigara zvakapenya,
kuti hapana munhu, achigomera zvinotapira,
iwe unogona kukanganwa nyasha dzako dzinofadza.
Pfungwa dzangu dzinoziva chete nezveRudo;
kwaari uye maari ini ndinochinjika zvakanyanya.
yeRudo simba inomutora iye anodikanwa,
kana kupenga kufunga, kwakakodzera.
Zvinondipa tariro kutapira kufema,
kana kuvava ndinochema mumafungu anopfachukira;
zvinongozvibatanidza chete kana ichidedera
mweya wangu wekutya unoonekwa kwechinguva.
Uye saka rombo rangu handina hanya naro mumakwikwi,
uye ndisingade kuzvitaura uye kuti nditaure:
kudzungaira ini ndinoenda mukudzungaira kune rudo ...
Uye kana nemunhu wese ini ndichifanira kuita mubatanidzwa
hazvina maturo kuchema kumuvengi wangu
Tsitsi dzisina tsitsi- kundidzivirira.
Kutakura kwemudiwa wangu kwakanyorovera,
saka akakodzera kudiwa kana achikwazisa,
kuti rurimi rwoga rwuve mbeveve
uye munhu wese anokundisa meso ake.
Rauda anofamba achienda achinzwa achikwidziridzwa
-kuzvininipisa kunomupfekedza iye uye kunomudzivirira-,
uye iri kupasi rinobatsira zvekudenga
kushandurwa kuita prodigy yemunhu.
Kubvutwa kwakanyanya kufunga nezvayo kunokurudzira,
iyo inodhakisa moyo nehunyoro.
chero munhu anozvitarisa anozvinzwa uye nekuzvinzwisisa.
Uye pamuromo wake, chii chiratidzo cherombo rakanaka,
kudzungaira kunoita senge kumonera kutapira
kuti mweya uri kuti kwaari: Gomera!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Dante Aligheri. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 sonnets